10 نقش‌آفرینی برتر آدام درایور؛ از جنگ ستارگان تا داستان ازدواج - مجله خبری ای بی سی مگ
10 نقش‌آفرینی برتر آدام درایور؛ از جنگ ستارگان تا داستان ازدواج
Adam Driver dia mpilalao amerikanina 37 taona izay nanintona ny sain’ireo mpijery sarimihetsika nandritra ny folo taona lasa ary nilalao sanganasa isan-karazany nataon’ny mpanao sarimihetsika malaza toa ny Coen brothers, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Noah Bomback ary Jim Jarmusch.
Ny fisehoan’ny kariera mpamily ao amin’ny andian-tantara amin’ny fahitalavitra “Girls” ary avy eo filalaovana sarimihetsika “Lincoln”, “Frances Ha” ary “Inside Llewyn Davis” nandritra ny taona maro. 2012 sy 2013 dia nanjary endrika matotra kokoa. Niseho tamin’ny andiany Star Wars ary nilalao Kylo Ren no nahatonga azy ho malaza sy malaza kokoa noho ny teo aloha, ary farany nilalao tamin’ny “BlacKkKlansma” sy “Story Story”, indroa izy no voatendry ho an’ny Academy Award ho an’ny mpilalao mpanohana tsara indrindra, mpilalao sarimihetsika tsara indrindra amin’ny andraikitra lehibe.
Na dia lasa olo-malaza fanta-daza aza i Driver folo taona taorian’ny nanombohany ny asany tamin’ny sinema, izy dia iray amin’ireo mpilalao sarimihetsika izay nandinika bebe kokoa ny sanganasa antsoina hoe sinema kanto noho ny niseho tamin’ny sarimihetsika ara-barotra mahomby. Ny fiaraha-miasa amin’ireo tsy miankina toa an’i Noa Bambac sy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpanatontosa sarimihetsika toa ny mirahalahy Coen, Martin Scorsese, Jim Jarmusch ary ny frantsay vao haingana Leos Carax dia mampiseho ny fomba fanaony.
Tamin’ny 2021, namoaka sarimihetsika telo nataon’i Leos Carax, “Annette”, “The Last Duel” ary “House of Gucci” i Adam Driver, samy avy amin’i Ridley Scott.
Ato amin’ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny anjara andraikitra 10 lehibe nilalao an’i Adam Driver, mpilalao amerikanina manan-talenta.
10. Fo noana
tale: Saverio Costanzo
Daty namoahana: 2014
Discount Ratan Tomates: 63 amin’ny 100
Ny sarimihetsika “Eager Hearts” dia tsy tonga lafatra, fa ny andraikitry ny mpamily ao aminy (mifanohitra amin’i Alba Rourwalker, izay milalao ihany koa) no iray amin’ireo zava-nisongadina tamin’ny repertoire-ny, ka izany no nahatonga azy niditra tamin’ny Fetiben’ny sarimihetsika iraisam-pirenena Venise. Raiso ny loka Wolfe Cup, izay omena an’ireo mpilalao sarimihetsika lahy sy vavy tsara indrindra amin’ny festival.
Milalao an’i Jude amin’ny sary mihetsika Eager Hearts ny mpamily; Nisy tovolahy iray nihaona tamin’i Mina, ny vadiny ho avy (nolalaovin’i Roerwalker) tany New York nandritra ny toe-javatra hafahafa izay nahatafiditra azy roa tao anaty trano fidiovana iray fisakafoanana.
Manambady izy roa ary manan-janaka. Tamin’ny voalohany dia mahafinaritra daholo ny zava-drehetra, fa rehefa afaka kelikely, dia naneho famantarana psychosis postpartum ilay vehivavy ary niatrika olana maharary i Jude: na hanalavitra ny reniny ilay zaza ary raha izany, rahoviana vao hanao izany.
Adam Driver dia nitondra ny sombiny sy ny fahasarotana an’io andraikitra io eo alohan’ny fakan-tsary miaraka amin’ny fahitsiana sy ny hery fakan-tahaka miavaka.
9. Ilay Lehilahy Namono Don Quixote
tale: Terry Gilliam
Daty namoahana: 2019
Discount Ratan Tomates: 65 amin’ny 100
Ao amin’ny sarimihetsika Terry Gilliam fampifanarahana ny tantaran’i Don Quixote malaza (izay navoaka farany roa taona lasa izay taorian’ny fahatarana am-polony taona maro), ny mpamily dia milalao an’i Sancho Panza, mpitantana mahatoky an’i Don Quixote, ary i Jonathan Price dia milalao Don Quixote.
Ilay horonantsary, fampifanarahana taorian’ny tantaran’ilay tantaran’i Miguel de Cervantes malaza, dia momba ny talen’ny talen’ny talenta sy ny mpanakanto izay, noho ny antony sasany, miditra amin’ny tontolon’ny nofinofin’i Don Quixote ary tsy afaka manavaka ny nofy sy ny zava-misy rehefa afaka kelikely.
Ny mpamily dia manandrana mampiseho ny tenany ho toetra tsy manam-paharoa amin’ny asan’i Panza, ary amin’ny ankapobeny, ny endriny maina sy tsy misy fanahy ao amin’ity sarimihetsika ity dia mifanentana amin’ny hatsikana manokana sy hafahafa nampiasain’i Gilliam.
درخشش تل‌ماسه در حضور ونوم و جیمز باند (باکس آفیس هفته)
tale: Martin Scorsese
Daty namoahana: 2016
Discount Ratan Tomates: 83 amin’ny 100
Ny endrik’ilay mpamily somary sadaikatra sy matotra, miaraka amin’ny hatsarany mahia, ary raha fintinina, ny toe-po izay ampitainy amin’ny mpanatrika raha vao jerena dia nahatonga an’i Scorsese ho safidy mety amin’ny “Fahanginana.”
Ny horonantsary, izay fanoharana miafina mifandraika amin’ny maritiora ao amin’ny fivavahana sy kolotsaina Kristiana, dia miorina amin’ny tantara nosoratana tamin’ny 1966. Driver sy Andrew Garfield dia niseho tao amin’ny sarin’i Garp sy i Rodriguez ho pretra sy misiônera tamin’ny taonjato fahafito ambin’ny folo nandeha avy tany Portugal nankany Japon. Amin’ity dia miafina ity dia mikasa ny hahalala izay nanjo an’i Firaira tompony izy ireo; Liam Neeson dia mitana ny andraikitr’i Ferreira ihany koa. Ampijaliana mafy izy mba hanerena azy hivadika ho bodisma. Amin’ity andraikitra ity dia mahavita mampiseho fanjakana ivelan’ny tany sy ara-panahy ny mpamily; Lehilahy iray manana firehetam-panahy mitovy amin’ny martiry kristiana.
Mety hampalahelo fa ny ankamaroan’ireo sehatra manan-danja amin’ilay sarimihetsika dia mifototra amin’i Garfield, ary mitana andraikitra lehibe kokoa noho i Adam Driver izy; Raha ny tena izy dia tsy mitombina ny milaza fa ara-lojika ny fampiasana mpilalao sarimihetsika dia tokony haverina, manome fanatrehana bebe kokoa ny mpamily, fanatrehana bebe kokoa noho i Garfield ary mihoatra an’i Neeson aza. Saingy na eo aza izany fetra rehetra izany dia nahavita naneho fahamatorana sy fahamatorana tsy manam-paharoa amin’ity asa ity ny mpamily.
tale: Leos Carax
Daty namoahana: 2021
Discount Ratan Tomates: 70 amin’ny 100
“Annette” dia iray amin’ireo sarimihetsika hafahafa indrindra amin’ity taona ity. Ny lalao sarimihetsika an’i Ron sy Russell Mill, izay azo heverina ho sangan’asa mpankafy ity sarimihetsika ity, notarihin’i Leos Carax, mpanoratra frantsay malaza, dia namorona melodrama lehibe.
Amin’ity horonantsary ity, Adam Driver dia milalao mpanao hatsikana mahatsikaiky iray izay raiki-pitia amin’ny mpihira opera iray nolalaovin’i Marion Cotillard. Izy roa dia manana zanaka atao hoe Annette, izay hafahafa mitovy amin’ny saribakoly kilalao. Ny feon’ity zavaboary hafahafa mihira ity dia mahafaly an’izao tontolo izao ary mitarika ny rainy amin’ny lahatra hafahafa sy mahatsiravina.
6- Logan Lucky
tale: Steven Soderbergh
Daty namoahana: 2017
Discount Ratan Tomates: 92
Ao amin’ny “Lucky Logan”, Adam Driver indray dia mampiseho ny fahaizany lehibe amin’ny tontolo manokana sy hatsikana amin’ity horonantsary momba ny heloka bevava Soderbergh ity.
Milalao an’i Clyde Logan izy; Lehilahy iray manana fomba fijery filozofika amin’ny fiainana sy lantom-peony mampalahelo avy any atsimo izay mpikambana tao amin’ny tafika amerikana ary nanompo tany Irak. Izy, izay naratra tamin’ny ady ary tsy nanana fitaovam-piadiana, dia miasa indray mandeha.
Ny rahalahin’i Logan Jimmy, nolalaovan’i Channing Tatum, dia voaroaka tamin’ny asany vao haingana teo amin’ny kianjan’ny hazakazaka NASCAR noho ny fikomianany halatra. Izy roa mirahalahy, niaraka tamin’ny fanampian’ny jeneraly iray mipoaka (nolalaovin’i Daniel Craig), dia nanandrana nanao asa ratsy.
Amin’ity asa ity, ny toetra sy ny fisehoan’ny mpamily dia ampiasaina tsara amin’ny fanatanterahana ny tanjon’ilay horonantsary, ary ny toetrany somary mangatsiaka sy ny fihetsika ambany momba ny hetsika hafahafa sy ny hadalana mitranga amin’ny tontolo ivelany dia nanome fifanoherana mampihomehy sy mampihomehy amin’ny sarimihetsika.
5- Raha mbola tanora isika
tale: Noe Baumbach
Discount Ratan Tomates: 84 amin’ny 100
Adam Driver dia mampiseho ny iray amin’ireo olona tsy mahay mangoraka indrindra ary, mazava ho azy, ny ankamaroan’ny olona parasitoana tamin’ny asany tao amin’ny “Mandra-pihavianay tanora”. Amin’ity hatsikana Nova Bambak ity dia milalao an’i Jimmy izy, mpanatontosa sarimihetsika tanora tia karoketra sy matoky tena izay naman’i Josh (nolalaovin’i Ben Stiller), talen’ny asa aman-draharaha miorina amin’ny indostrian’ny sarimihetsika.
Josh dia miaina toe-javatra sasany, ary raha ny marina dia azo lazaina fa ny fiainany iray manontolo dia niatrika karazana stagnation sy stagnation, na teo amin’ny sehatra manokana na teo amin’ny sehatra matihanina. Amin’ity toe-javatra ity dia nahaliana azy bebe kokoa noho ity namana vaovao sy akaiky azy ity izy ary maniry tontolo tanora.
Saingy tsy marin-toetra i Jimmy ary mazava ho azy fa liana amin’ny biolojia parasito izy. Izy dia manana toetra mampatahotra lalina izay hita amin’ny fomba fijerin’ny namana tafintohina ary aseho amin’ny mpanatrika.
-کککککک Bl (BlacKkKlansman)
tale: Spike Lee
Daty namoahana: 2018
Discount Ratan Tomates: 96 amin’ny 100
Ny horonantsary dia fampifanarahana ny tantara nosoratan’i Black Clansman, mpanavakava-bolonkoditra mainty, ary milaza ny tantaran’ny mpitsongo mainty iray tonga ao amin’ny Fikambanan’i Coca-Cola.
John David Washington (zanakalahy malaza any Denzel Washington) ‌ dia milalao mpitsikilo mainty izay mahavita miditra an-tsokosoko amin’ireo ekipa ambony ao amin’ny fikambanana, ary i Adam Driver dia milalao polisy izay miseho ho jiosy.
Blackklenzman dia iray amin’ireo mpilalao mahay indrindra an’i Adam Driver, ary amin’ny fotoan-tsarotra sy henjana amin’ny sarimihetsika dia miharihary kokoa amin’ny mpijery ny kalitao miavaka amin’ny asany.
3- Star Wars Series Episodes 7 ka hatramin’ny 9 (Star Wars VII-IX)
tale: JJ Abrams ، Rian Johnson ، JJ Abrams
Daty namoahana: 2015 ، 2017 ، 2019
Discount Ratan Tomates: 93 amin’ny 100, 91 amin’ny 100, 52 amin’ny 100
Ny fahombiazan’ny mpamily an’i Kylon Ren amin’ny maha-olon-dratsy mpiavonavona sy mpiavonavona azy, ny zafikelin’i Darth Vader angamba no endri-javatra lehibe indrindra ary tanjaka lehibe indrindra amin’ny fizarana 7 ka hatramin’ny 9 amin’ny andiany Star Wars. Ny fizarana telo voalohany amin’ny andian-dahatsoratra dia fantatra amin’ny maha-telozoro fampidirana, ny fizarana telo manaraka, ny fizarana 4 ka hatramin’ny 6, dia fantatra amin’ny maha telozoro lehibe, ary ny fizarana 7 ka hatramin’ny 9 dia fantatra amin’ny hoe telozoro misesy.
Ny fizika manokana an’ny mpamily, anisan’izany ny halavany sy ny fahaizany mahatalanjona, dia namorona karazana mampatahotra amin’ity toetra ity ary nahatonga toetra iray tsy manam-paharoa tamin’ny tolona sy fotoana niainany. Ny anjara andraikitry ny mpamily tamin’ny trilogy farany an’ny tantara mitohy, Star Wars: The Rise of Skywalker, dia nisy fifanoheran-kevitra mahaliana teo amin’i Kylo Ren sy ny toetran’i Ray tamin’i Daisy Ridley, na dia tsara toy ny fanatrehany azy aza ny mpamily. Star Wars: Ny Force Awakens dia tsy ny anjara asany voalohany tamin’ny andiany Star Wars. Tamin’io lafiny io dia nahaliana ny mpijery izy tamin’ny alàlan’ny fanararaotany ny heriny sy ny fomba manokana hanala baraka ny fahavalony tamin’ny fahalemen’izy ireo.
Na izany aza, angamba ny mpamily mpilalao sarimihetsika lehibe indrindra amin’ny anjara asan’i Kyle Wren dia miverina amin’ny fizarana fahavalo amin’ny Star Wars: The Last Jedi. Ilay ampahany ampanaovin’ny mpamily ny toetran’ny olona maratra sy maratra izay manatona ny sain’ny mpanatrika amin’ny fomba manokana toy ny devoly maka fanahy. Manana ny fahalemeny manokana izy tamin’ny fisarahana farany, indraindray natahotra ary indraindray tsy natoky tena, sahala amin’ny zatovo mety rendrika amin’ny tomany amin’ny fotoana rehetra.
10 دستیار وفادار انیمیشن‌های دیزنی که همیشه فراموش می‌شوند
tale: Jim Jarmusch
“Patterson” nataon’i Jim Jarmusch dia sanganasa faran’izay saro-pantarina sy manintona ary maneso, ary ny fisian’i Adam Driver ho lohalaharana dia manome ny mpanatrika fotoana hahitana ny faharesen-dahatra ataon’ilay mpanakanto amin’ny fotoanan’ny sarimihetsika. mampita izany ary maneho izany amin’ny alàlan’ny fahaizany mihetsika.
Ity andraikitry ny mpamily ity dia mety mifanohitra amin’ny fombany mahazatra amin’ny fisehoana amin’ny anjara asa hafa, izay amin’ny ankapobeny dia mitaky fisian’ny lehilahy sy matanjaka kokoa. Ao Jarmusch dia milalao mpamily fiara fitateram-bahoaka antsoina hoe Patterson, izay mipetraka any Patterson, New Jersey izy, ary poeta mpanao hatsikana. Izy koa dia iray amin’ireo mpankafy ny poeta iray antsoina hoe William Carlos Williams, izay sendra nanoratra tononkalo antsoina hoe Patterson momba ny tanàna nahaterahan’ilay mpilalao sarimihetsika.
Toy ny sarimihetsika Logan tsara vintana, tamin’ity indray mitoraka ity dia efa nanompo tao amin’ny tafika ny mpilalao mpamily, ary izany dia nanome endrika manokana sy manintona ilay mpilalao; Toy ny lehilahy tsy mitady korontana sy miady nefa tsy matahotra an’io.
Ny mpamily dia misarika olona ho antsika izay afa-po tanteraka amin’ny fiainany sy ny anjarany. Izy no mitondra ny bus-ny, mihira tononkalo rehefa miala voly, tsy mijaly amin’ny anarana tsy tononina anarana ho poeta na tsy tononina anarana ny tononkalony, mandany ny alina eny amin’ny manodidina ary mankafy fifandraisana mahafinaritra sy mifankatia miaraka amin’ny vadiny.
Araka ny mazava dia manana tontolo tsotra ity sarimihetsika ity, ary ny mpamily dia mampiasa ny fahaizany rehetra hamoronana toetra tsotra, saingy amin’ny fomba tena hendry sy kajy. Patterson dia tokony ho raisina ho iray amin’ireo mpandray anjara lehibe indrindra amin’ny fahafaham-po sy matotra.
1- Tantara momba ny fanambadiana
Discount Ratan Tomates: 94 amin’ny 100
Ho an’ireo mpankafy an’i Adam Driver ary, mazava ho azy, mpijery sarimihetsika maro hafa, ny zava-bitany tao amin’ny “Story Story” an’i Noah Bambak dia namorona fotoana sarimihetsika tsara indrindra tamin’ny folo taona lasa.
Ny sarimihetsika dia mifototra amin’ny tantaran’ny fisarahany tamin’ny vadiny Jennifer Jason Lee, ary ny mpamily dia milalao an’i Charlie, talen’ny teatra manan-talenta izay manambady an’i Nicole (nolalaovin’i Scarlett Johansson). Nicole tenany dia mpilalao sarimihetsika Hollywood izay nahafoy ny asany matihanina tany Los Angeles hiasa amin’ny orinasan-tsehatra vadiny, ary nisintaka tamin’ny olona sy ny zavakanto ary natao an-jorom-bala.
Na dia mety manamarina an’i Nicole amin’ity fisarahana ity aza ny mpijery, ny mahasarika ny toetra noforonin’ny mpamily dia mampijaly mafy antsika io fisarahana io.
Ao amin’ny iray amin’ireo sehatra tsy hay hadinoina tao amin’ilay horonantsary, nisy tompon’andraikitra iray nody mba hahita hoe toa tsara toa ny ray i Charlie hikarakara ny zanak’izy mivady. Nandray ny tànany i Charlie, fa raha mbola miresaka amin’ilay tompon’andraikitra izy dia manandrana manafina ny fanaintainana. Ny zavatra toa an’ity, toa kely nefa mahavariana, dia nahatonga ny tantaran’ny fanambadian’i Adam Driver ho iray amin’ireo andraikitra tsara indrindra tamin’ny asany.
Inona no tokony hojereko? Mpilalao sarimihetsika Sinema manerantany
22 فیلم پدر و پسری برتر تاریخ سینما
12 سایبورگ برتر در فیلم‌های سینمایی؛ از دکتر اختاپوس تا پلیس آهنی
امیر جدیدی؛ مربی تنیسی که «قهرمان» سینما شد (پرتره‌ی یک بازیگر)